Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan imi iyadoo waalid ila socon / In magan-gelyo laga raadsado Iswiidhan / Go'aanka codsiga magangelyo / Diidmo
Adiga iyo wakiilkaaga caruurta ayaa kala hadlaya Hey'ada Socdaalka wixi ku saabsan xaaladaada iyo waxa aad ka fikirayso mustaqbalka.
Haddii aad hesho diidmo waxaad haysataa laba doorasho:
Haddii aad aqbasho Hey'ada Socdaalka go'aankeeda in la diiday codsigaaga magan gelyo waxaa tani lagu magacaabaa inaad ku qanacday. Haddii aad ku qanacday markaasi ma dooran kartid inaad rafcaan ka qaadatid go'aankan xilli dambe.
Akhri dheeraad ku saabsan waxa dhacaya haddii codsigaaga magan-gelyo la diido oo ku qoran Hey'ada Socdaalka bogeeda. Warbixintan waxaa lagu helayaa Iswiidhish iyo Ingiriisi.
Haddii aad u aragto in Hey'ada Socdaalku aanay si sax ah u qiimeyn dacwadaada waxaad xaq u leedahay inaad rafcaan ka qaadato go'aankan.
In rafcaan la qaato micnaheedu waa in adiga iyo wakiilkaaga caruurta aad warqad u qoraysaan Hey'ada Socdaalka oo sheegaysaan in aanaydin ku raacsanayn go'aankan.
Haddii aad doonayso inaad rafcaan ka qaadato Hey'ada Socdaalka go'aankeeda waa in adiga iyo wakiilkaaga caruurta aad la hadashaan gar-yaqaankaaga. Gar-yaqaankaaga ayaa kaa caawinaya inaad si sax ah u qaadato rafcaan.
Akhri dheeraad ku saabsan waxa gar-yaqaan sameeyo.
Haddii aad doonayso inaad rafcaan ka qaadato Hey'ada Socdaalka go'aankeeda markaasi gar-yaqaankaaga ayaa warqad u diraya Hey'ada Socdaalka. Taasi waa inay ku qorantahay:
Haddii aanad ku qanacsanayn Maxkamada arrimaha socdaalka xukunkeeda waxaad rafcaan u dirsan kartaa Maxkamada sare ee socdaalka. Gar-yaqaankaaga ayaa ku caawin kara.
Adigu waa inaad rafcaan u dirsataa Maxkamada sare ee socdaalka gudaha saddex toddobaad laga soo bilaabo maalinti aad xukunkan ka heshay Maxkamada arrimaha socdaalka.
Haddii aad hesho go'aan ah mustaafurin ama diidmo waxaa loo yeerayaa adiga iyo wakiilkaaga caruurta dhowr kulan oo ka dhaca Hey'ada Socdaalka si loo qorsheeyo safarka dib ugu noqoshada dalkaaga ama dal kale oo aad xaq u leedahay inaad joogto.
Xilliga kulamadan ayaad su'aalo weydiin kartaa Hey'ada Socdaalka shaqaalaheeda. Waxaad helaysaa macluumaadka ku saabsan doorashooyinka kala duwan ee in dib loo noqdo.
Haddii aad ka yartahay 18 sano waa inay jiraan wax ah waalid, qaraabo kale ama urur ku qaabili kara marka aad halkaasi timaado. Adiga iyo wakiilkaaga caruurta ayaa dhiibaya magaca iyo lambarka telafoonka ee waalidkaaga ama qaraabadaada si Hey'ada Socdaalku ula xiriiri karto iyaga.
Haddii aad doorato inaad safarto keligaa waxay Hey'ada Socdaalka kaa caawinaysaa safarkan. Haddii Hey'ada Socdaalku u aragto in aanad samayn wada-shaqaynta in aad dib u noqoto markaasi waa in adigu aad keligaa diyaarsato safarkan.
Haddii aad ka wayntahay 18 sano, oo kharashka maalinlaha ah aad ka hesho Hey'ada Socdaalka, waxay Hey'ada Socdaalku yarayn kartaa kharashkaaga maalinlaha ah haddii ay iyagu u arkaan in adigu aanad la samayn wada-shaqayn dhinaca dib u noqodka.
Mararka qaarkood waxaad heli kartaa kaalmo dhaqaale taas oo la bixiyo marka aad adigu dib u noqoto. Tani waxay ku xirantahay dalka aad dib ugu noqonayso. Waa in adigu aad codsato kaalmadan dhaqaale ka hor intaanad ka safrin Iswiidhan.